Ny Peshitta na Peshita dia dikan-teny tranain'ny Baiboly kristiana amin'ny teny siriaka. Nadika avy tamin'ny teny hebreo ny Testamenta Taloha fa ny Testamenta Vaovao kosa dia mety avy tamin'ny teny grika.
Ny Peshitta, sora-tanana
Ny anarana hoe PeshittaModifier
Ny Peshita, sora-boky
Ny ananara hoe Peshitta dia avy amin'ny teny siriaka hoe ܡܦܩܬܐ ܦܫܝܛܬܐ / mappaqtâ pshîṭtâ, izay midika ara-bakiteny hoe "dikan-teny tsotra". Nefa azo adika hoe "iraisana" na "an'ny rehetra" na "mivantana" koa ny teny hoe Peshitta. Matetika anefa dia adika hoe "tsotra" io teny io. Ny teny mlitovy aminy amin'ny fiteny arabo dia ny hoe البسيطة / Al-Basîṭah, izay midika hoe "ilay tsotra".
Tsy tokony hampitivizina amin'ny dikan-teny siriakan'ny Heksaplan'i Origenesy anefa ny Peshitta (izay natao tamin'ny taonjato faha-7). Tsy fantatra ny fotoana nanomezena anarana ilay Baiboly amin'ny teny siriaka hoe Peshitta, fa hita voalohany tao amin'ny asa soratr'i Mosesy Bara Kefa na Moizy Bar Sefasy, avy eo tao amin'ny asa soratr'i Bara-Hebreo na Bar-Hebrio (siriaka: Bar 'Ebroyo) tamin'ny taonjato faha-13.
Ny teny sisiaka dia endriky ny fiteny arameana. Ny teny hoe Peshitta dia soratana avy amin'ny abidy siriaka ho amin'ny abidy latina amin'ny fomba samihafa toy izao: Peshitta, Pshitta, Pšittâ, Pshitto, Fshitto. Azo ekena izy rehetra ireo nefa ny hoe Peshitta no mahazatra indrindra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Peshitta&oldid=1000352"
Dernière modification le 14 Janoary 2021, à 09:17
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 09:17 ity pejy ity.